(သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
၁ မဟာရဋ္ဌသာရ၊ ရှင် (မြန်မာ ၈၃ဝ-၈၉၂)
၂ ပြုစုခဲ့သည့် စာပေများ
မဟာရဋ္ဌသာရ၊ ရှင် (မြန်မာ ၈၃ဝ-၈၉၂)[ပြင်ဆင်ရန်]
ယင်းလင်္ကာကြီး၌ စာဆိုကျော်သည် အနေအထိုင်အားဖြင့် နန်းတွင်း၌ ကြီးပြင်းခဲ့ ရသူ၊ ဇာတိအားဖြင့် ငယ်ရွယ်သေးသူ ဖြစ်သည့်အလျောက် လောကဓမ္မတာ လူမှုရေးရာများကို ဖွဲ့နွဲ့ရေးသားရာတွင် သိကျွမ်းပိုင်နိုင်လှခြင်းကြောင့် နှောင်းစာဆိုတို့ အတုယူရလောက် အောင်ပင် ကောင်းမွန်လှပေသည်။ ယင်းလင်္ကာကြီး၌ ဘူရိဒတ်နဂါးမင်း မယ်တော်သည် သားတော်ကို မမြင်မတွေ့ရသဖြင့် လွမ်းမှိုင်တွေဝေပုံကို -
တရှိုက်မက်မက်၊ တသက်သက်လျှင်၊ စက်လက်မျက်ရည်၊ ဆည်လည်းမတတ်၊ မိန်းသေပြတ်မျှ၊ ကြင်ဆွတ်လေလေ၊ အောက်မေ့ချေသော်၊ မပြေတို့နိုင်၊ ကမ်းနှယ်ယိုင်လျက်၊ ရိပ်မြိုင် နန်းထဲ၊ နေစမြဲသား၊ သွေးခဲဘုန်းခေါင်၊ မယ်တော့်မောင်ကို၊ ပြောင်ပြောင်ဝင်းဝင်း၊ ဗိမာန်တွင်း၌၊ ဟင်းလင်းအချည်း၊ မြင်ကတည်းက၊ အူသည်းငြိမ့်ငြိမ့်၊ ကြောခြင်စိမ့်မျှ၊ နှစ်သိမ့်လွမ်းရူး၊ ပတ်ပတ်မူးလျက်၊ အထူးရှေ့နောက်၊ တောင်မြောက်မသိ၊ မျက်စိ မိုက်မိုက်၊ မှောင်တိုက်အသွင်၊ ယခုထင်ခဲ့၊ တိုင်ပင်နှိုင်းချက်၊ သားဝမ်းထွက်နှင့်၊ ဆိုတက်မနီး၊ တဖျင့်ကြီး သို့၊ ကိုယ်ထီးကျန်စွာ၊ ငါ့ကြမ္မာကား၊ ဇာတာဂြိုဟ်တန့်၊ မသန့်စန်းလဂ်၊ ရှေးဝိပါက်ကြောင့်၊ ရွှေငှက်ဟင်္သာ၊ ရေမဲ့ရာ၌၊ မျက်နှာအောက်ချ၊ မှိုင်လည်တသို့၊ သားလှလုလင်၊ မျိုးလွန်းကြင်ကို၊ ဖူးချင်တောင့်တ၊ မတွေ့ရ၍၊ ကြောင့်ကြညှိုးချုံး၊ မရွှင်ပြုံးသည်၊ ကိုယ်လုံးသမ်းတို့စွတကား။
အကြောင်းမှာ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရသည် ထိုမော်ကွန်းကို ရေးသားလျက် ဘုရင်မင်းမြတ်ထံ သွင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရ၍ ဖြစ်သည်။ ယင်းမော်ကွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်မဟာသီလဝံသသည် မိမိရေးပြီးသမျှကို တပည့်များအား ဖျက်ဆီးစေသော်လည်း တပည့်များက စာကို မြတ်နိုး၍ သိမ်းဆည်းထားသဖြင့် ယနေ့အထိ တွေ့ရှိရသေးကြောင်း အဆိုရှိသည်။ စာဆိုကျော်နှစ်ပါး၏ စာကို နှိုင်းခိုင်းရာ၌ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၏ စာတို့သည် ရှင်မဟာသီလဝံသ၏ စာများလောက် မနက်နဲ၊ နုရုံယဉ်ရုံမျှသာရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ရှေးဆရာကြီးများက ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၏ စာများသည် တူရိယာ ၅ ပါးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း တီးသကဲ့သို့ကြားရ သူတို့၏ နား၌ လွန်စွာ သာယာနာပျော်ဖွယ် ဖြစ်ပေ၏။
ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၏ အကောင်းဆုံးသော လက်ရာကား သက္ကရာဇ် ၈၈၅ ခုနှစ်ခန့်တွင် ပြီးစီးသော စတုဓမ္မသာရ ကိုးခန့်ပျိုးဖြစ်သည်။ ထိုပျို့သည် ဘုရားဟော ဝီသတိနိပတ် ဟတ္ထိပါလ ဇာတ်တော်ကို အလင်္ကာ တန်ဆာဆင်ကာ မြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုဖွဲ့နွဲ့ထားသော ပျို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဟတ္ထိပါလပျို့ဟုလည်း အမည်တွင် သည်။ ဆရာတော် ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရသည် လောကအကြောင်း၌ နိုင်နင်းသူ ဖြစ်သည့်အလျောက် ဓမ္မကြောင်းကို လောကကြောင်းဖြင့် အမွှမ်းတင်ကာ ဖွဲ့ဆိုရေးသားရာတွင် အထူးပင် ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်လှပေသည်။ ဤကိုးခန်းပျို့ သည် လောက၊ ဓမ္မ၊ ရာဇကြောင်း သုံးပါးစလုံး ပြည့်ဝစုံလင်လှ၏။ သို့သော် သက္ကရာဇ် ၈၈၆ ခုနှစ်တွင် မိုးညှင်းစား စော်ဘွားစလုံနှင့် ပြည်ဘုရင် သတိုးမင်းစောတို့အင်းဝနေပြည်တော်ကို တိုက်ခိုက်ကြပြီးနောက် ပြည်ဘုရင် က ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ အစရှိသော ပညာရှင်များကို ပြည်မြို့သို့ ပင့်ဆောင်သွားလေသည်။
ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရလည်း ပြည်မြို့သို့ရုတ်တရက် လိုက်ပါသဖြင့် တပည့်များထံမှ ကိုးခန်းပျို့၏ ရှေ့၈ ခန်းကိုသာ သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးလျှင် ဇာတ်ပေါင်းခန်းကိုမူ စုံစမ်းရှာဖွေရာ မရသေး ကြောင့် အသစ်ထပ်မံ ရေးရလေသည်။ သို့သော် ဇာတ်ပေါင်းခန်းကို အသစ် ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပေသည်။ ကိုးခန်းပျို့ကား အလွန်ခန့်ညား၍ အနှစ်သာရနှင့် ပြည့်စုံသော ပျို့ကြီးဖြစ်သည်။ ယင်းပျို့တွင် ကိလေသာတည်းဟူသော မိုးကြီး စီးယိုကျသည့်ဘေးမှ လွတ်မြောက်အောင် ဘာဝနာဉာဏ်တည်း ဟူသော သံပြား ပျဉ်ပြားများဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် စိတ်နှစ်လုံးတည်း ဟူသော ကျောင်းသင်္ခမ်းကို ပြဆိုရာ၌ - အာပေါ်ကမ္ဘာ၊ ပျက်ပြုန်းခါ၌၊ ရူပါဝစရ၊ သောဋ္ဌသတွင်၊ သုဘကိဏ်အောက်၊ ဘုံတစ်လျှောက်ကို၊ လင်းပျောက်နိုင်အောင်၊ ပြည့်လျှမ်းဆောင်သည်၊ ရေတောင်မောက်ဖြိုး၊ ရွာသည့်မိုးထက်၊ ထမ်းပိုးလှင်ကန်၊ အပြန် ပြန်တည့်၊ သည်းထန်လှစွာ၊ ကိလေသာဟု၊ မဟာမေ၊ ဖြိုးဖြိုးကျလျက်၊ သောကစိမ့်ဧး၊ ယိုသားဘေးမှ၊ ဟန့်ထေးလို့ငှာ၊ ဘာဝနာဉာဉ်၊ သံပြားပျဉ်တိ၊ မြဲယှဉ်ပတ်ကုံး၊ လွှမ်းပိတ်ဖုံးသား၊ နှလုံးသင်္ခမ်း၊ ကျောင်းသားဝှမ်း၌ ဟူ၍ ဥပမာ ဥပစာစကားတို့ဖြင့် တန်ဆာဆင်ကာ ဖွဲ့နွဲ့ စီခြယ်ခဲ့ပေသည်။
တောင်ကား ပင်းယ၊ မြောက်မှ စစ်ကိုင်း၊ ရံသိုင်းသာလှ၊ ရွှေအင်းဝ၌၊ နန်းကမြင်ထင်၊မြို့လယ်ခွင်ဝယ်၊ သခင်ဘုရား၊ တည်ထားသာသနာ၊ သင်္ချာအမွန်၊ နှစ်ထောင်လွန်၍၊ အစွန်မြတ်မှု၊ ဆယ့်နှစ်ခုဝယ်၊ ဥတုဝဿ၊ မိုးလရှေးဖျား၊ နေသွားကရကဋ်၊ ခေါ်မှတ်ဝေါဟာ၊ အာသဠှာ၌၊ ပညာပွားဘို့၊ ကုသိုလ်ပို့သား၊ ငါတို့ဖွားရာ၊ ချက်မြှုပ်ရွာသည်၊ ၊ အောင်ခြာပြည်ကြီး နားတောင်းတည်း။
ဧကက္ခရ၊ ကောသကျမ်းလာ၊ အဝဂ်ရာဝယ်၊ ဥစ္စာဝါစက၊ တတ်စွမ်းလှ၍၊ အတ္ထပြဲ့ပြဲ့၊ ဟောဖွင့်ချဲ့သည်၊ ၊ ဘက်မဲ့ အဘယ်သဒ္ဒါနည်း။
ကူဋာဂါရ၊ ဂေဟကြငှန်း၊ ပွင့်ရွှေနန်းနှင့်၊ မည်မှန်းအဝ၊ ပုရိန္ဒဟု၊ စွဲထသန္ဓေ၊ တို့ချက် ြေ<ွကသား၊ မင်းနေပြည်သာ၊ ထိုနေရာဝယ်၊ သမ္ဘာမျိုးချ၊ ငါတို့ဘလည်း၊ ဓမ္မပါလ၊ ဗြဟ္မဏသို့၊ စာဂစွန့်ကြဲ၊ ကုသိုလ်ရဲလျက်၊ ဝမ်းထဲဖြောင့်စင်း၊ ဂုဏ်သတင်းတည့်၊ လှိုင်ခြင်းရနံ့၊ ပန်းနှယ်ပျံ့မျှ၊ လောက်ငံ့သောက်စား၊ မကုန်အားသား၊ ပုဏ္ဏားဇော်ဂီ၊ မှီခိုရဟန်း၊ ကူးသန်းလားလာ၊ ချိုင့်ဝှမ်းရာဖြင့်၊ သဒ္ဓါပြန့်ပြန့်၊ စိတ်မတွန့်တည့်၊ ရှည်သန့်လက်ကြီး၊ ပေးမငြီးဟု၊ မြှောက်ချီးသာဓု၊ ယခုတိုင်အောင်၊ လူ့ဘောင်ပြောပ၊ ချီးမွမ်းကြ၏။ ရှေးကစီလျဉ်၊ မင်းစဉ်မင်းဆက်၊ မပျက်စွဲသုံး၊ ဤထုံးဤနည်း၊ ဤသို့တည်းဟု၊ သိပ်သည်းနတ်ရွာ၊ သိမြင်မှာလည်း၊ လိုရာမကျန်၊ တတ်ပွန်ကျယ်ဝန်း၊ အဆန်းဆန်းသား၊ ဂဏန်းဟူးရား၊ ကိုးပါးနဝင်း၊ တြင်းသုံးခု၊ ရှစ်ခုဂြိုဟ်ပြေး၊ ကောင်းကြွယ်ရေးနှင့်၊ ရန်ဘေးဥပဒ်၊ စက်သွားဖြတ်သို့၊ မချွတ်မှန်အောင်၊ ကျေးဇူး ဆောင်သား၊ မင်းခေါင်မင်းဖျား၊ မင်းနှစ်ပါးတို့၊ မှတ်သားယုံကြုံ၊ မြတ်နိုးတုံသည်၊ ၊ စုပုံ
အိုဘယ့်ဘယ် ၊ အိုဘယ့်သမီးတော် ၊ ထင်ပေါ်ဘုန်းပျံ့သင်း ၊
အိုဘယ့်ဘယ် ၊ အိုဘယ့်သမီးတော် ၊ နတ်သော်ပုံမယွင်း ၊
အိုဘယ့်ဘယ် ၊ အိုဘယ့်သမီးတော် ၊ စန္ဒာလနှယ်ဝင်း ၊
သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၏ ဘဝသည် နန်းသူတို့အလယ်တွင် ထင်ရှား ကျော်ကြားခဲ့၏။ ကဗျာလင်္ကာ စာဆိုတော်လေးဖြစ်သောကြောင့် နန်းတွင်းသူ အလှကလေးများက ပျူငှာအခွင့် အရေးပေး၍ မြတ်နိုးမိကြမည်။ ထိုအထဲတွင် သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရနှင့် နှစ်ကိုယ်တူ ရည်မျှ၍ ချစ်ခဲ့ရသူမှာ ' ဝဏ္ဏပဘာ ' ခေါ် လှကလျာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရလောင်းလျာသည် ကဗျာဆရာ ဖြစ်သည့်အလျောက် ဝဏ္ဏဘာ၏ အလှကို လင်္ကာဖြင့် ကုံးသီခဲ့၏။ ရတုဖြင့် ရေးစီခဲ့၏။ ဆရာတော်သည် ဝဏ္ဏပဘာ၏ အလှသရုပ်ကို တောင့်တဲတွန့်ရတုပိုဒ်စုံဖြင့် ဖော်ထုတ်လှစ်ပြခဲ့၏။ ထိုရတုမှာ လူ့အဖြစ် လူ့ဇာတိကပင် ချစ်သူ၏ အလှကို ခြယ်မှုန်းခဲ့သည်ဟု ယူဆရ၏။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ' ပုရေနိသင် ' ချီရတုတို့၌ ရဟန်းဘဝဖြင့် စပ်ဆိုရာ အထိန်းအချုပ်ဖြင့် စပ်ဆိုခဲ့သည်။ ဝဏ္ဏပဘာအဖွဲ့မှာကား ချစ်သူ၏ အလှကို အားကုန်ခြယ်မှုန်း၍ သီကုံးဖွဲ့ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ထို့ပြင် မျက်စိအောက်တွင် ရှုမြင်ရသည့်အတိုင်း ဖွဲ့ဆိုခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝဏ္ဏပဘာရတုကို ငယ်စဉ်လူ့ဘဝက ရေးသားခဲ့သည်ဟု ယူဆစရာ ရှိပေသည်။
ချုံကြီးတောအုံ၊ ဝါးရုံဝါးစေး၊ သစ်ကျားဘေးကို၊ မတွေးဆံဖျား၊ မလေးစားတည့်၊ တရားသံဝေ၊ အောက်မေ့ချေသော်၊ ကြေးရွှေဂဟေ၊ မစပ်ချေသို့၊ စာပေတတ်ပွန်၊ ဓမ္မခန်နှင့်၊ ကျမ်းဂန် သိမြောက်၊ ပဉ္စင်းရောက်က၊ ထပ်လှောက်ကြင်ဖွယ်၊ ရှေးသောနှယ်ကို၊ ၊ အဘယ်ကြိုးရှာ
ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော ပြဿနာများကိုသာ စာဟောင်းပေဟောင်းများ၌ အမှတ်အသား တွေ့ရသေးသည်။ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရနှင့် သျှင်မဟာသီလဝံသတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နှောင်းခေတ်စာပေ နယ်မြေတွင် အတည်မပြုလောက်သော အရေးအသားများကား မြောက်မြားလှစွာကုန်၏။ထိုအရေးအသားတို့သည်လည်း ယုံကြည်ဖွယ်ရာ တန်ဆာဆင်၍ ရေးသားခဲ့ကြသဖြင့် အတော်ပင် တွင်ကျယ်လျက် ရှိခဲ့၏။ သို့ရာတွင် နှုက်နှုက်ချွတ်ချွတ် လေ့လာသူ ပညာရှင်တို့သည်ကား စစ်၍ စစ်၍ ယုံကြည်ကြလေသည်။
မည်သို့ရှိစေ သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရတို့ ခေတ်တွင် စာပေဖွဲ့နွဲ့မှုကို ယုံကြည်ကိုးစားသူလည်း ရှိမည်။ ပယ်မြစ်ကန့်ကွက်သူလည်း ရှိမည်။ ဤသည်မှာ လောကနိယာမ သဘောအရ ဖြစ်သည်။ သျှင်မဟာရဋ္ဌသာရဆရာတော်ကလည်း ဤကဲ့သို့ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်းသဘောကို သိတော်မူသည် သာတည်း။ သို့သော်လည်း ဘုရားလူ့ဘ၊ မုနိန္ဒလျက်၊ မိန်းမယောကျာ်း၊ လူ့စကားဖြင့်၊မကြားစကောင်း၊ မနာတောင်းကို၊ အကြောင်းဆောင်သွေး၊ ဟောတုံသေး သဖြင့် ချီးမွမ်းမှု၊ ကဲ့ရဲ့မှုတို့ကို ကြည့်ရှုတော် မမူအားဘဲ လူ့အကျိုး လူ့စာရိတ္တအတွက် အတွေးလည်း မပျက်ခဲ့။ အရေးလည်းမပျက်ခဲ့။ ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်သည်သာ ဖြစ်ပေသည်။
ကြောင်း၊ သင်လိုက်ရှောင်း၏၊ မကောင်းဝန်တို၊ အကုသိုလ်ကား၊ ၊ ငါ့ကို မချစ် ပစ်စေသော။
နည်းလျှောက်ကြံမိ၊ ဟတ္ထိပါလ၊ ဇာတကဟု၊ ဓမ္မမြုတေ၊ ဟောကြားပေသော်၊ ထဲနေရပ်အောင်၊ သာစည်ဘောင်တွင်၊ မင်းခေါင်ဒုတိယ၊ တို့မွေးဘလျှင်၊ နားဝငြိမ့်ငြိမ့်၊ နှစ်သိမ့်ကြည်စွာ၊ တောင်းပန်ထွာသည်၊ ၊ တန်ဆာဆင်စိမ့်သောကြောင်းတည်း။
အပြီးသတ်၍၊ ရေးမှတ်ပုရပိုက်၊ တင်တုံလိုက်မှ၊ သောင်းတိုက်ဇမ္ဗူ၊ လူတို့နာခန့်၊ ပညာဖြန့်သည်၊ ၊ နိုးခန့်နှလုံးမပြောင်းတည်း။
ဆရာတော်သည် ဒုတိယဘုရင်မင်းခေါင်၏ ဆန္ဒတော်ကို ဘုရင်မင်းမြတ် မရှိသည့်နောက် နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာမှ ကိုးခန်းပျို့ဖြင့် ရေးစပ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လေတော့သည်။ အသက် ၂၅-နှစ်ခန့်ကပင် တောင်းပန်ထားခဲ့သော်လည်း မရေးသားနိုင်ခဲ့သဖြင့် ကိုးခန်းပျို့ကို ရေးသားပြီးချိန်တွင် ဆရာတော်သည် မင်းခေါင်နှင့် မိဖုရားတို့အား အမှတ်ရ တမ်းတမိသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာတော်သည် ကိုးခန်းပျို့ကြီးကို မကြားနာနိုင်တော့ပြီဖြစ်သော မင်းနှင့် မိဖုရားတို့အား ငါသည်ဤစာကိုးခန်းကို ပြုစု၍ ရအပ်သော ကုသိုလ်အဖို့ကို အမျှဝေငှပါသည်၊ ငါ၏ ဒါယကာ မင်းမျိုးဆွေစုံတို့သည် ရောက်လေရာ ဘုံဗိမာန်မှ အမျှယူကြပါစေ၊ ဟူ၍ ကုသိုလ်အမျှကို ဝေငှတော်မူ ခဲ့ပါသည်။ ဤသည်ကို ရည်၍ ကိုးခန်းပျို့နိဂုံး၌-
တောင့်တဆိုသည်၊ ၊ ကုသိုလ်ဝေငှဆင့်လောင်းတည်း။
သည်၊ ၊ ဘုန်းတော်အတုမဲ့တောင်းတည်း။
ရဋ္ဌသာရ ၊ ခ တြန်း အဌ် ၊ ဖွားလတ်သက္ကရာ ။ စမ္မာ ဆိဒြ ၊ ဗသျှူးချ ၊ ပြောင်းကြွသက်ခန္ဓာ ။
↑ လှသမိန် (၁၉၆၁ ခုနှစ်). ဂန္ထဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိပေါင်းချုပ်. ၃၅၇၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့: ဟံသာဝတီစာအုပ်တိုက်, ဂ၊ ၉။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဟာရဋ္ဌသာရ၊_သျှင်&oldid=523228" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၁၃:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။